Kuyini Barbecue kagesi
Ngo ukupheka lanamuhla libe yindawo ekhethekile kunikezwa izinto ekhishini namathuluzi. Long Sezadlula izinsuku lapho cishe zonke izinqubo eyenziwa ngesandla, futhi ukudla iphekwe phezu komlilo. Zikagesi ezintsha zenza cishe ngokuzenzakalelayo ngokuphelele inqubo ukulungiselela ngisho usiyise ukuphelela. Nokho, lapho uqala ukukhuluma mayelana idivayisi efana Barbecue kagesi, imicabango yabantu washintsha labapheki kanye gourmets.
Abanye baphikisa ngokuthi kule divayisi bonakalise inyama kuphela. Seyomile ke, angeke Fry kahle futhi onganikeli nephunga elimnandi intuthu. Abanye bathi lezi Barbecue ekhaya, amandla kagesi, akuhlukile nezinye yesimanje ukupheka zikagesi. Ngokwemvelo, kungase asiphindi ngokuphelele inqubo yokuwugazinga inyama phezu komlilo ovulekile futhi akakwazi lokuphinda ukunambitheka esiphelele izoso, kodwa kungenzeka wayengomunye wabo eduze ngokoqobo ukupheka.
zokudla abaningi nemigoqo abanakukwazi ukupheka inyama phezu umlilo evulekile, ngoba lephula nezidingo ukuphepha komlilo kanye inkonzo sanitary. Ngakho-ke labapheki kulezi zikhungo zimane ophoqelelwe ukusebenzisa leli thuluzi, efana Barbecue kagesi. Izibuyekezo amakhasimende efanayo phezu izitsha okuphekwe cishe njalo omuhle. Lokhu kungenxa yokuthi ukuphathwa ezishisayo we umkhiqizo leli thuluzi ngokuphelele ulingisa le ukupheka phezu komlilo. Nge zokuyithambisa efanele nokungeza izinongo olufanele ukuhlukanisa isidlo okuphekwe phezu komlilo, lokhu nalokho zisebenzisa Barbecue kagesi cishe kungenakwenzeka.
Futhi uzinake ukuthi Izibuyekezo ezingezinhle mayelana kule yunithi ukuza ziqhamuka kuphela labo bantu abangenalo ke futhi wazwakalisa kuphela yokubandlulula. Abanikazi of the Barbecue ukukhuluma ngazo kahle kakhulu, ngoba, njengoba ayeke wazama ukupheka isidlo kuyo kanye, uma uqale ukuba sazise kalula inqubo futhi ukunambitheka inyama eyosiwe. Inzuzo ezibalulekile, okuyinto has a Barbecue yesimanje kagesi, ukuthi ingalungiswa ngasiphi isikhathi sonyaka kanye kungakhathaliseki isimo sezulu.
Namuhla, kunamabandla onobuhle ezintsha amadivayisi ezinjalo, ezithinta inani elikhulu imisebenzi ehlukene. Abakwazi kuphekwe hhayi kuphela inyama kodwa futhi izinhlanzi, imifino kanye amakhowe. Kulokhu, i-Barbecue kagesi ezifana Ungasingatha ukosa, izoso ngisho ukupheka shawarma.
Ngakho, kuyacaca ukuthi idivayisi kungaba ukulungiselela izitsha ahlukahlukene, amanye izoso akugcini. It ngokuzithandela isetshenziswe kuphela emizi ejwayelekile, kodwa futhi upheka emhlabeni wonke. imikhiqizo izinga Nambithani sasipheka sekuyahwalala neze kunabayeni izinga labo babelungiselela ukuvula umlilo, kodwa gourmet yangempela ngisaluzwa umehluko. Kodwa into ebaluleke kakhulu kule divayisi uyakwazi ukuyisebenzisa ekhaya, hhayi amalangabi umlilo futhi ngaphandle kokuba ukuya ezweni.
Yiziphi Ukushisa izakhi ukuze amanzi ashisayo
Weinzierl Baos 772 - Universal Knx Ip Gateway.
Ibhajethi ithebhulethi: Intengo ukubuyekezwa. The best isabelomali ithebhulethi
Indlela yokwenza 3D izibuko ngezandla
Yiziphi transformers yokulinganisa
Uyini lingena umbono ikhamera semoto?
Zhangjiajie National Park China: incazelo, izithombe, Amahora okuvula, kanjani lapho futhi kuphi ukuze uhlale
Ukunikezwa Imvume Yokuthola Umuthi amafutha ngesiLatini, ezithi: izici kanye nemithetho enquma
Kungaba kuphi kuholele imfundo kokuqhubeka
Imiyalelo ukulamula "Salonpas"
Isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi Isiqu: izakhiwo ewusizo, kilojoule, ukupheka zokupheka
Isilonda peptic kanye nezizathu ekuthuthukiseni lesi sifo.
Compensator ngoba iphayiphi: izinhlobo, abakhiqizi, izincazelo kanye nokubuyekeza. Ukunwetshwa amalunga omzimba ukuze amapayipi eyenziwe polypropylene
Inani okuthiwa u-Oleg. Imvelo PHETHO womnikazi wayo
Izibonelo kweminingi yemibiko yentuthuko. Indlela yokwenza umbiko
Needle Mouse: ukugcinwa kanye ukunakekelwa ekhaya
Okungcono: "Hilak forte" noma "Bifiform"? Izinkomba zokusetshenziswa, izibuyekezo, amanani